Boqolaal qof oo la tallaalay ayaa UK la dhigay Delta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Boqolaal qof oo la tallaalay ayaa UK la dhigay Delta
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Khubaradu waxay ka digayaan in 'tallaalladu aysan baabi'inayn dhammaan halista' kala duwanaanshaha Delta ee aadka u faafa oo hadda ah 99 boqolkiiba dhammaan cudurrada COVID-19 ee Boqortooyada Midowday.
Waxaa jira calaamado hore oo sheegaya in jabsadu aysan joojin karin gudbinta Delta.
Dhammaan tallaalada laga isticmaalo UK waxay u baahan yihiin dadka qaata inay qaataan laba qiyaasood si ay si buuxda u tallaalaan.
Qiyaastii 75 boqolkiiba dadka qaangaarka ah ee Boqortooyada Midowday waxay heleen laba xabbadood ilaa maanta.
Warbixintii ugu dambeysay ee coronavirus, Caafimaadka dadweynaha ee England (PHE) ayaa ka digay tilmaamaha hore ee ah in dadka la tallaalay laga yaabaa inay awoodaan inay gudbiyaan kala duwanaanshaha Delta ee COVID-19 sida ugu fudud kuwa aan helin wax tallaal ah.
Sida laga soo xigtay sii deynta PHE, boqolaal qof oo si buuxda loo tallaalay UK ayaa la dhigay isbitaal leh kala duwanaansho aad u faafa Delta COVID-19.
Laga bilaabo Julaay 19 -keedii ilaa 2 -dii Ogosto, 55.1% ee 1,467 qof oo isbitaal la dhigey kala duwanaanshaha Delta ayaan la tallaalin, PHE ayaa tiri, halka 34.9% - ama 512 qof - ay qaateen laba qiyaasood.
19 -ka Luulyo waxay ahayd markii xannibaadaha xannibaadda si weyn loogu fududeeyay UK.
Dhammaan tallaalada laga isticmaalo Boqortooyada Midowday-kuwa ay soo saareen AstraZeneca, Moderna iyo Pfizer-BioNTech-waxay u baahan yihiin dadka qaata inay qaataan laba qiyaasood si ay si buuxda u tallaalaan.
“Marka dad badan oo la tallaalo, waxaan arki doonnaa isbitaal dad aad u badan oo la tallaalay,” ayay tiri PHE.
Jenny Harries, oo ah madaxa fulinta ee Wakaaladda Amniga Caafimaadka ee UK, ayaa sheegtay in tirooyinka isbitaalku ay muujinayaan “mar kale sida ay muhiimka u tahay in dhammaanteen aan u soo baxno inaan helno labada qiyaasood ee tallaalka isla markaan awoodno inaan sameyno”.
Felix Harrington wuxuu leeyahay,
Ogosto 10, 2021 markay tahay 14:23
Tallaallada been abuurka ah ee COVID-19 ma siinayaan wax difaac ah ama kama horjoogsadaan in qof la qaadsiiyo, hase yeeshee waxay keenaan waxyeelo daran oo ay ka mid tahay geeri, waxayna dhab ahaantii u horseedaan nidaamka difaaca inuu ka caroodo soo-gaadhista fayraska mustaqbalka sidaan aragno. Kaliya kuwa aan lagu mudin mid ka mid ah tallaaladan been abuurka ah ayaa hadda sheegan kara xasaanad.
Cvntsmasher wuxuu leeyahay,
Ogosto 8, 2021 markay tahay 06:08
Nigrdom, ma sax baan ahay?
Gerard Wirth wuxuu leeyahay,
Ogosto 7, 2021 markay tahay 20:41
Lambarada caalamiga ah ma taageeraan dadka qaatay Astra Zeneca… Warbixinnada noocan oo kale ah waa inay muujiyaan tirooyinka kuwa qaatay tallaal kasta si gooni gooni ah iyo si gooni gooni ah sawir waxbarasho.
HADDA…. waa inaad qarka u saaran tahay inaad isticmaasho maaskaro… .haddii dadku ku soo booqdaan xitaa haddii la tallaalo maaskaro oo hubaal ka fogaadaan isu soo dhowaanshaha jirka. Way xanaaqi kartaa qof walba laakiin tani way ku caawin doontaa. Talada ugu fiican ha ka soo qayb galin shirarka waawayn ee qaarkood 'maaskaro-yar'… ku xidho gaadiidka dadweynaha… .. xafiiska dhexdiisa ama shaqadaada oo kale.
Paul Hudson wuxuu leeyahay,
Ogosto 7, 2021 markay tahay 20:00
Haa laakiin waa maxay heerka dhimashada? Loo baahan yahay macnaha guud. Haddii dadka la tallaalay ay qaadaan cudurka laakiin boqolkiiba aad u yar ay dhintaan ama u baahdaan isbitaal, goorma ayuu Covid la mid yahay hargabka caadiga ah?